प्रहरीको पिटाईले बालक आईसियुमा । फुलचोकीमा हराएका जोन तामाङवारे प्रिन्सिपलसंग लाईभ – Complete Nepali News Portal
प्रहरीको पिटाईले बालक आईसियुमा । फुलचोकीमा हराएका जोन तामाङवारे प्रिन्सिपलसंग लाईभ
यो दिन त्यसै आएको होइन । यो दिन हामीले प्राप्त गर्दा कयौँ मानिसको रगतले यो माटो भिजेको छ । अनगिन्ती सिउँदोहरु उजाडिएर हजाराँै बालबालिका टुहुरा भएर हामीले यो अधिकार पाएका छौँ । मुलुकमा परिर्वतन ल्याउन, आफ्ना सन्ततीलाई सुखद भविष्य दिन विभिन्न आन्दोलनमा छाती थापेर तातो गोली खान नडराउने विर सपुत सम्पुर्ण ज्ञान अज्ञान शहिदहरुलाई सलाम !
तिमीले आँफु मरेर हामीलाई दिएको परिर्वतनको फाइदा उठाएर आज केहि मानिसहरु २४ घण्टा दलालसँग उठबस गर्छन । पैसा पाइन्छ भने मापदण्ड नपुगेको अस्पताललाई खोल्न दिन्छन्, कलेज खोल्न दिन्छन्, नियुक्ति, सरुवा बढुवामा पैसा खान्छन्, बाटो पुल जस्ता संरचना कमजोर बनाइ कमिशन खान्छन् ।
प्रहरीको पिटाईले बालक आईसियुमा । फुलचोकीमा हराएका जोन तामाङवारे प्रिन्सिपलसंग लाईभ !
धादीङमा जीउदै पुरेको डोजर चालकलाई कस्ले
झा’क्री छुटेपछी गुरु बनझा’क्रीले गरे अचम्मको
मम्मीले बुहारी खोज भन्दै छन् कहाँ